किन हुन्छ मिर्गाैलामा पत्थरी ? कसरी जोगिने सबै जानकारी - Nawalpur Dainik
किन हुन्छ मिर्गाैलामा पत्थरी ? कसरी जोगिने सबै जानकारी
कुनै पनि मानिसमा पत्थरी हुनुमा विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । उमेर, लिं’ग, वंशागुगत, वातावरण, पानी , खानेकुरा आदिको कारणले नै मानिसमा पत्थरीको समस्या देखा पर्ने गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा व्यवस्थित जिवनशैली साथै सन्तुलित खानेकुराको कमीले गर्दा पनि मिर्गाैलामा पत्थरी देखा पर्ने गर्छ ।
मिर्गाैलामा पत्थरी भएका आदिभन्दा बढि मानिसलाई आफ्नो शरीरमा पथर छ भन्ने समेत थाहा नहुने गरेको डा बज्रचार्यले बताए । कतिपय पत्थरी ठूलो हुदाँसम्म नदुख्ने हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा ६ /६ महिनामा यस सम्बन्धि परिक्षण गराउन आवश्यक पर्छ । सबै पत्थरीका बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपर्दैन् । शल्यक्रिया त्यो वेला मात्र गर्नुपर्छ जव पिसावमा रगत देखापर्छ , मिर्गाैला सुनिन्न थाल्छ । मिर्गाैला स्वस्थ राख्न दिनको ३ देखि ५ लिटर पानी पिउनुपर्छ । पानीले ५० देखि ६० प्रतिशत मिर्गाैलाको रोग निको पार्छ । साथै साधरण पिसाब पनि ६/६ महिनामा परिक्षण गराउदा उनको सुझाव रहेको छ ।
Prevकिन आउछ शरीरमा मुसा, कसरी हटाउने ? सबै जानकारी
Nextकाखीमुनिको गन्धबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय